शेयर बजारमा महिला लगानीकर्ता थपिँदै, कसरी प्रवेश गर्ने शेयर बजारमा ? - IAUA
शेयर बजारमा महिला लगानीकर्ता थपिँदै, कसरी प्रवेश गर्ने शेयर बजारमा ?
ramkrishna July 3, 2017	कसरी प्रवेश गर्ने शेयर बजारमा ?शेयर बजारमा महिला लगानीकर्ता थपिँदै
चार वर्ष अघि शेयर बजारमा प्रवेश गर्दा कलंकी काठमाडौकी लक्ष्मी पराजुलीलाई पुरुषको भीडमा आफू एक्ली जस्तै महसुस हुन्थ्यो । त्यसपछि कतिलाई आफैले प्रेरित गरेर शेयरमा लगानी गर्न लगाउनुभयो भने कोही सेयरबजारमा लगानी गर्दै गरेका महिला लगानीकर्ता देखेर यसक्षेत्रमा प्रवेश भए ।
दिउँसोको समय प्रायः सुतेरै बिताउने झापाकी अम्बिका सुवेदीले शेयरमा लगानी गरेको तीन महिना मात्र हुँदैछ । शेयरमा किनबेचमा अभ्यस्त हुन थालेपछि अहिले उहाँलाई घर बस्न पनि मन लाग्दैन । शेयरबजारमा नयाँ तथा पुराना लगानीकर्ता सँगको अन्तरक्रियाबाट शेयरको खरिद बिक्री बारे जानकारी हुने भएकाले उहाँको ध्यान सधैं सेयरबजारले नै तानिरहेको हुन्छ ।
कलंकी काठमाडौंकी लक्ष्मी पराजुली र झापाकी अम्बिका सुबेदी जस्ता धेरै महिलाका लागि सेयरबजार लगानीको राम्रो क्षेत्रको रुपमा परिचित हुँदै गएको छ । घरमा बालबालिकाको स्याहार सुसार मात्र गर्ने महिलाका लागि सेयर बजार खुला हुने समय अनुकल भएकाले पनि महिला लगानीकर्ता थपिएका हुन् ।
पहिले १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म खुला रहने सेयर बजार अहिले ११ बजे खुलेर ३ बजे बन्द हुन्छ । ‘यो समय गृहिणीहरुले सुतेर बिताउने समय हो, बिहान स्कुलमा बालबालिका पुर्‍याएर शेयर बजारमा आउने अनि बजार बन्द भएपछि स्कुलमा बालबालिका लिन जाने’ शेयर बजारमा अनुभवी लगानीकर्ता भनेर चिनिएकी लक्ष्मी पराजुली भन्नुहुन्छ ‘स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा रातारात ड्यूटी गर्नुपर्छ, अरु मानिस सुत्ने बेलामा बल्ल काममा खट्नुपर्छ, यो क्षेत्र त त्यस्तो छैन, ४ घण्टा राम्ररी खटे हुन्छ ।’
कसरी प्रवेश गर्ने शेयर बजारमा ?
तपाई सँग केही पूँजी छ र शेयरबजारमा लगानी गर्ने मन छ भने तपाईले शुरुमा शेयरबजारको बारेमा धेरथोर बुझ्न जरुरी छ । शेयरमा लगानी गरेर राम्रै आम्दानी हासिल गरेकी बानेश्वर काठमाडौंकी विमला लोहनीका अनुसार साधारण शेयर कारोबारबाट बजारमा छिर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसपछि शेयरबाट कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ ? कतिबेला सेयर किन्ने र कतिबेला बेच्ने भन्ने बारेमा तालिम लिएर पनि छिर्न सकिन्छ । अहिले बजारमा शेयर कारोबार सम्बन्धी तालिम दिने विभिन्न तालिम केन्द्रहरु पनि खुलेका छन् । लोहनी भन्नुहुन्छ ‘शुरुमा आइपीओ बेचेर आएकी हुँ, त्यसपछि केही तालिम पनि लिएँ, तर तालिम भन्दा पनि बढी त मार्केटमा आएर नै जानेकी हुँ ।’ उहाँका अनुसार तालिमकर्ताले पनि शेयर किन्ने बेच्ने तरिका, सेयर धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिने तरिका लगायतका विषयमा तालिम दिन्छन् ।
सुझबुझका साथ लगानी गर्दा राम्रो आम्दानी
क्याम्पसमा पढाउने जागीर छाडेर शेयर बजारमा आएकी वानेश्वरकी विमला लोहनीले सुरुमा १५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुभएको थियो । त्यस यता निरन्तर शेयरबजारमा सक्रिय रहेकी विमलासँग अहिले झण्डै ३५ लाखको पूँजी भइसकेको छ । शेयरको भाउ बढ्दा मात्तिने र घट्दा नआत्तिने स्वभावले उहाँ शेयर बजारमा टिकीरहनुभएको छ । बजारको ग्राफलाई बुझेर धैर्यताका साथ लगानी गर्दा नडुब्ने उहाँको अनुभव छ ।
त्यस्तै शिक्षण क्षेत्रबाटै शेयरबजारमा हात हालेकी कलंकी ढुंगेअड्डाकी लक्ष्मी पराजुलीले पनि यसक्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि पछाडि फर्केर कहिल्यै हेर्नुपरेको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘स्कुल पढाएँ, मलाई सन्तुष्टि भएन, आफैले नुडल्स उद्योग पनि खोलें तर दुई चार जना स्टाफले नहुने त्यसमा पनि भनेजस्तो सफलता मिलेन, शेयरमा हात हालेपछि चाहिं मलाई असन्तुष्टि छैन ।’ शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने महिलाका लागि सहयोग गर्न हरदम तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
Previous Previous post: सेयरमा लगानी गर्ने चाहनेले थाहा पाउनु पर्ने कुरा
Next Next post: सेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? पढ्नुहोस् १० ‘इन्भेस्टमेन्ट टिप्स्’